Arsenal oo isku diyaarineysa in ay xaalad jahwareer ah ku abuurto kooxda Manchester United – Gool FM
Arsenal oo isku diyaarineysa in ay xaalad jahwareer ah ku abuurto kooxda Manchester United
(Arsenal) 11 Nof 2018. Macalinka kooxda Arsenal Unai Emery ayaa doonaya inuu lasoo saxiixdo xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan kana tirsan safka Manchester United ee Juan Mata suuqa xagaaga ee soo aadan.
Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa sheegay in Arsenal ay xiiseeneyso saxiixa laacibka reer Spain iyo kooxda Manchester United ee Juan Mata, si uu qeyb kaga noqdo qorshaha Gunners ee xili ciyaareedka soo aadan.
Dhinaca kale shabakada “SKY Sport” ayaa dhawaan sheegtay in Manchester United ay dooneyso in Juan Mata ay ku qanciso inuu iska sii joogo garoonka Old Traford, si uu u saxiixo heshiis cusub.
Juan Mata ayaa heshiiska uu ku joogo garoonka Old Traford wuxuu dhacayaa dhamaadka xili ciyaareedka soo aadan, wuxuuna xaq u yeelan karaa inuu la saxiixdo koox kasta bisha Janaayo ee soo aadan.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Juan Mata uu ka war sugayo in Manchester United ay u soo bandhigi doono qandaraas cusub xiliyada soo socda, isla markaana uu xiiseenayo inuu iska sii joogo garoonka Old Traford, xili dooqa labaad uu ka dhiganayo ku laabashada kooxdiisii hore ee Valencia.
Si kastaba Juan Mata ayaa Manchester United kaga soo biiray kooxda Chelsea bishii January ee 2014, wuxuu ilaa iyo haatan kasoo muuqday 147 kulan, wuxuuna dhaliyay 32 gool.
“Vinícius Jr wuxuu ka mid noqon doonaa ciyaartoyda ugu fiican aduunka mustaqbalka dhow”
Shaxda rasmiga ah kulanka Premier League ee kooxaha Liverpool vs Fulham